Fiidiyow: Ka-tagista Dukaamada Dukaameysiga oo ay la socoto Listrak | Martech Zone
Fiidiyow: Ka-tagista Dukaamada Dukaameysiga oo ay la socoto Listrak
Axad, Abriil 24, 2011 Arbacada, Nofeembar 30, 2011 Douglas Karr
Marwalba inyar adoo daalacanaya Youtube, waxaad heleysaa jawharad. Fiidiyowgaan oo ka socda Listrak waxaa la daabacay Febraayo markii ay bilaabeen xallintooda gawaarida wax iibsiga, laakiin waxaan doonayay inaan ku daabaco halkan sababo dhowr ah. Marka hore, waa aragti guud oo fiican waxa looga tagayo gaadhigii wax iibsiga is ee xigay, waa muuqaal qurux badan waxaanan rajaynayaa in Listrak ay soo saari doonto inbadan oo iyaga ka mid ah.
Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah ee ka Bogga macluumaadka alaabta ee Listrak:
Sida laga soo xigtay bogga Listrak, gaari-ka-tagista internetka ee looga tagay ayaa ah arrin kharashka tafaariiqda khadka tooska ah 71% isbeddelladoodu waxay u dhigmaan in ka badan $ 18 bilyan sanadkii. Bogga Listrak wuxuu leeyahay ka tagay xisaabiyaha soo kabashada gaariga si dhakhso leh waad u qiyaasi kartaa khasaarahaaga.
Liiska gawaarida dukaamaysiga ee dayaca Listrak wuxuu dib uqabanayaa gawaarida dukaamaysiga laga tagay waxayna siineysaa fursado ay dib ugula macaamilaan dukaameeyayaasha iyagoo u maraya dalabyo shaqsiyeed iyo fariin laxiriira Ka faa'iideysiga barnaamijyadooda, olole dib-u-hawlgal wuxuu noqon karaa hal emayl ama waxaad horumarin kartaa dhowr emayl si aad u kobciso beddelaadda.
Ka tagida gawaarida dukaameysiga ma ahan oo keliya qodob la xiriira eCommerce. Goob kasta oo shirkadeed oo loo adeegsado dadaallada suuq-geynta ee soo-galaya ayaa sida caadiga ah leh daciifnimo halkaasoo martida ay ku lumaan habka beddelaadda Waqtiyada qaarkood, waa si fudud maxaa yeelay qaabeynta liidata ma bixiso wax dhiirigelin ah oo lagu sii wado. Dhibaatooyinka kale waxay noqon karaan qaab ballaaran, waqtiyada gaabiska bogga, ama arrimo kale.
Haddii aad horumarin karto habab aad dib ugula xiriiraan dhagaystayaashaas, waxaad caadi ahaan ogaan doontaa in sicirkaaga beddelka uu ka badnaan doono beddelaad kasta oo aad ku heleyso booqdayaasha cusub.
Ka soo kabashada Google Panda
Iska yaree Cabbirka Faylkaaga CSS 20% ama ka badan